excle problem - MYSTERY ZILLION
excel မှာ cell အကွက်ကို arrow key နဲ့ သွားလို့ မရတော့လို့ ကူညီပေးကြပါအုံး ... mouse နဲ့ ရွေ့ မှ ဘဲ ရတော့တယ် ...
သိတဲ့သူ များ လမ်းညွန်ကြပါအုံးနော် ... ကျေးဇူး အထူးကို တင်ပါတယ်
Scroll Lock များပွင့်နေလား။ ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဦး။
Yes. Scroll lock is the only one solution for that problem.
ဟုတ်ကဲ့ ... ရသွားပါပြီ .. ကျေးဇူးနော် မဖြူပန်းခက် နဲ့ ကို၀င်းဦး ရေ ..
ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် .. ကြုံတဲ့ အခါ မုန့် ၀ယ်ကျွေးမယ်နော်